I-IBC2019: Inkxaso entsha yeCobalt Digital Solutions 4K Ukuhamba komsebenzi wesitudiyo kunye nesicelo seSoftware-NAB bonisa iindaba ngu-Broadcast Beat, Umsasazi osemthethweni we-NAB Show-NAB BONISA LULA
ikhaya » iindaba » IBC2019: Inkxaso eNtsha yeCobalt Digital Solutions 4K Workflows ye Studio kunye neeSicelo zeSoftware.
IBC2019: Inkxaso eNtsha yeCobalt Digital Solutions 4K Workflows ye Studio kunye neeSicelo zeSoftware.
CHAMPAIGN, Ill. - Aug. 13, 2019 - Digital Cobalt izakubonisa izisombululo zayo esekwe kwikhadi i-4K kunye ne-HDR yokuhamba komsebenzi kwizakhelo ezivulekileyo zeGear® kwinyanga ezayo e-IBC2019 e-Amsterdam (Yima 10.B44). Amagqabantshintshi emveliso aya kubandakanya iidekowudi zayo ezintsha kunye neekhowudi, I-RIST Main profiles, isisombululo se-bi-directional SDR / HDR isisombululo semveliso ephilayo, kunye nee-multivviewers ezintsha kunye ne-amplifiers zokuhambisa. Ngapha koko, inkampani iya kudlula ngendlela entsha ye-12G evulekileyo ye-router kunye nesisombululo se-RIST esangweni.
Uluhlu olutsha lwe-9992-DEC Series ye-HEVC / AVC / MPEG-2 iikhowudi ze-openGear ozimele ziya kwaziswa kumdlalo. Njengoluhlu lwenkampani ye-9992-ENC yoluhlu lweekhowudi, i-9992-DEC eguquguqukayo ifaka ilayisensi-njengoko-uhamba-ilayisensi, ke abasebenzisi bahlawula kuphela amanqaku afunekayo xa kufuneka. Yakhelwe ukufezekisa ezona mfuno zingqongqo zabasasazi banamhlanje, i-9992-DEC ixhasa ukuya kuthi ga kwisisombululo se-4K kwaye inikezela ngokuhambelana ngokupheleleyo kwezakhono zokuchaza ividiyo. Olu chungechunge lubandakanya i-9992-2DEC ezimbini-deki ye-doder, kunye ne-9992-DEC-4K-HEVC ene-4K ene-single-channel okanye i-2K ezimbini kunye nenkxaso ye-H.265.
Kwangoko kulo nyaka, uCobalt wayengomnye weenkampani ezininzi zokufumana imbasa ye-Emmy® ngomsebenzi wayo wokubambisana kwi-ARQ, ubuchwephesha bobuchwephesha obusezantsi. Kwi-IBC, i-Cobalt iya kuxhasa inkxaso kwi-RIST Main profiles, eyongeza izinto ezinjengokubethelwa (i-DTLS okanye i-PSK), ukurhubuluza, ukulandelwa kwe-NAT, ukuhanjiswa kwe-point-to-multipoint, ukusebenza kwamanani asezantsi, kunye nokuhambisa okuqinisekileyo kwe-ST-2110.
Ukuphuculwa okutsha kwe-HDR kumboniso kubandakanya ukugqitywa kokuphela kokusebenza kwe-HDR ngaphakathi kweCobalt's 9904-UDX-4K phezulu / ezantsi / umguqululi owela umnqamlezo. Ukusetyenziswa kweTekhicolor's suite yezixhobo ze-HDR, ezinokufakwa kwi-odolo kukhetho olunye loku-odola, i-9904 inokuvelisa imethadata eguquguqukayo xa iguquka isuka kwi-HDR iye kwi-SDR kwaye ibuyele kwi-HDR, igcina ulwazi olupheleleyo lomfanekiso we-HDR.
I-Cobalt iyaqhubeka nokuphuhlisa i-9971 yayo yechungechunge lwee-multiviewers, yongeza iziphumo ezimbini kunye nolawulo lomsebenzisi. Ukuhambisa ukujonga okungalukhuni kwe-asynchronous 4K kunye HD iisiginali, zonke iindidi ezintathu zamkele iintlobo ezahlukeneyo zezimpawu kunye nokusetyenziswa. Zonke iimodeli zibandakanya HDMI Iziphumo zokujonga ukujonga ezoqoqosho kubathengi bebanga le-4K. I-template enye yeqhosha lokucwangcisa ukwenza lula ukuseta, kodwa abasebenzisi banokwenza kwaye bagcine ii-layisation ezenziwe ngazo. Ukuya kuthi ga kwi-9971 ukuya kuthi ga emihlanu ingafakwa kwisakhelo esinye esivulekileyo se2 RU-kwaye amakhadi amaninzi kwikhonkco elihlanganisiweyo anokubonelela ngokubekwa kwemithombo ye-multiviewer ukuya kwimithombo ye-64.
Uchungechunge olutsha lwe-9915 lwee-DAs luxhasa imithombo ye-4K 12G-SDI kwaye ivumela ukuqhuba kobhedu ixesha elide ngokwaneleyo ukufikelela kwezixhobo ezininzi kulawulo lwenkosi. Enye yeemodeli ezine kolu chungechunge, i-9915DA-4 × 16-XPT-12G, ibandakanya iindlela ezine zokufaka ezinokuthi zinqumlezelwe kwiziphumo ze-16 ze-DA kulungelelwaniso oluninzi. Ukuya kufikelela kumakhadi e-10 anokufakelwa kwisakhelo esinye esivulekileyo, sivumela izikhululo ze-40 zokufaka kunye nokuhambisa ukuya kuthi ga kwiziphumo ze-160.
"Abasasazi ngoku bamkela i-4K njengesiqhelo semveliso, kwaye iCobalt ineemenyu ebanzi yezisombululo ezisekwe kwisiseko se-studio kunye nemveliso eshukumayo," uChris Shaw, usekela-mongameli olawulayo wentengiso kunye nentengiso, Digital Cobalt. "Iimveliso zethu zibonelela ngeendlela eziguqukayo nezingabizi kakhulu zokuqhubekeka, ukubeka esweni kunye nokusabalalisa umxholo we-4K kunye ne-HDR."
Ezinye iimveliso kwiCobalt booth ziya kubandakanya ikhadi elitsha le-12G-SDI elivulekileyo lomjikelo we-matrix ye-12 × 12. Yakhelwe ukulingana kwizakhelo zelifa, ikhadi linceda abathengi ukuba basebenzise iziqithi ze4K ziindleko ngokufanelekileyo. Ukubonisa ubunkokeli be-RIST yetekhnoloji, i-Cobalt iphinda isungule i-SafeLink, isisombululo esivulekileyo esinokuthatha imijelo yothutho emininzi kwaye inike i-RIST wrapper ukukhusela amakhonkco evidiyo phakathi kwamanqaku amabini.
malunga Digital Cobalt
Digital Cobalt Inc. idizayini kwaye ivelise iiplani eziphambili eziwonga amanqaku anceda ukuhlala kwimveliso yevidiyo kunye nokulawulwa kwamakhasimende okuguqulela kwi-IP, i-4K, i-HDR, ifu, nangaphezulu. Njengomlingani osisiseko kwisicwangciso se-openGear® kunye nelungu eliziqhenyayo SMPTE, ICobalt inikezela ngesicwangciso esisebenzayo sokubambisana esenza ngcono ukuthotyelwa kwezobuchwepheshe. Kwabiwa nge-network network abathengisi, abahlanganisi beenkqubo kunye namanye amaqabane, Digital Cobalt iimveliso zixhaswa ngewaranti eneminyaka emihlanu. Funda ngakumbi kwi www.cobaltdigital.com.
Iikhamera ze-KUSI ziphucula iikhamera ze-ENG ukuya kwi-JVC 2 / 3-intshi INCAM GY-HC900 - Septemba 19, 2019
Usasazo lwePixs lwasasaza lweMveliso esekwe kwiLifu eMTE2019 - Septemba 18, 2019
I-IBC2019: IiTVU Iinethiwekhi zeTVU Zinceda abasasazi baZise uMxholo oChaziweyo kubabukeli ngokuSebenza ngokuSebenza ngeBanga. - Septemba 5, 2019
12G-SDI 4K CES2017 Digital Cobalt Cobalt Encoder I-decoder Encoder UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli eye IBC i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa ingxolo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw Multiviewer RIST SoftAtHome, MStar, iCES2017 Iintetho kunye nemisrya i-subtitling, i-Digital Nirvana, uhlolo lweendaba, IBC TVU Networks	2019-08-13
Previous: I-1606 Studio Phawula iNqanaba lesiThoba eNyanga eSebenzayo ye-BMW, ​​ye-UCSF yezeMpilo, kaCarl kaJr kunye nangakumbi.
next: I-VFX iLegion yenza iziPhumo 'zokutya ezakhiweyo eMelika,' iNgcaciso yeMbali yeDigital Dr Mini Mini